Somali - Stichting Bekeerling
Stichting Bekeerling waa moe-assaso ku saabsan faahfaahinta Islaamka. Waxaan gaarsiinaa Islaamka qofwalbo, muslim ha ahaado, ama yuu ahaan.
Qofwalbo in aan caawino diyaar baan u nahay. Ha ahaado qofkaas walaal Islaamka ku cusub, ama walaal Islaamka ku cusbeenin, oo laakin diintiisa ku soo noqday.
Waxaan u taagannahay waa nabad, runsheegga iyo dhaxdhaxaad. Yoolkeena wuxuu yahay in aan dadka islaamka si sax ah u barno. Islaamka in uu yahay diinta cilmiga waa arin cad. Cilmiga islaamka qofwalbo ayuu u furanyahay in laga barto safxadaan. Ha ahaado qofkaas qof kitaabada gadan karin, ama qof misaadjidka ka fogyahay. Qofwalbo wuxuu u yahay pagekaan lacagla’aan.
Dadka hadafkeena ku saabsanyahay waa;
• Dadka islaamka rabaan in ee bartaan.
• Dadka soo muslimeen
• Misaajidooyin iyo mu’assasooyin Islaami ah.
• Dadka Islaamka faahfaahintiisa internetka ka raadiyaan.
Islamka Holland iyo Belgium
Diinta Holland iyo Belgiumka u labaad waa Islaamka. Dadka Holland iyo Belgium dhax degan 5% waa muslim. Dadka soo muslimo maalinwalbo si xoogan ayee ku biirtaa.
Mu’assasadeeni waxee wadaa ku dowaan labaatan arimo. Arinwalbo aan wadno waxaan u wadnaa in aan gaalada ka daadhacsiino Islaamka muxuu yahay, muslimiin cusub in Islaamka u sharaxno iyo dacwooyin kale.
Kheyrkaan miyaad ka soo qeebgale.
Yoolkeena miyaad nola qabtaa? Markaa Paypal sadaqadaada nagu darso.
Sadaqa waxaadkale nagu darsankartaa via bangi.
Nagala soco pagekeena Weblog, Facebook, YouTube, Twitter iyo Instagram.
Su’aal miyaad qabtaa?
Nagala soo xiriir via WhatsApp (+31 6 36430091) ama Facebook iyo email [email protected]